ithathe elinye igxathu eyokungaphephi konesi - Ilanga News
Home Izindaba ithathe elinye igxathu eyokungaphephi konesi
ithathe elinye igxathu eyokungaphephi konesi
IYASHAYISANA imibiko ngombhikisho wezisebenzi zezempilo esibhedlela saseWentworth, eThekwini, obungoMsombuluko.
Ngokwemibiko yabezindaba, uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, usuxolisile ngokuphazamiseka okwesikhashana kokusebenza kulesi sibhedlela.
Kuthiwa iziguli ebezisesibhedlela ukuzothola usizo, zisale dengwane, abahlengikazi balesi sibhedlela beyeka ukusebenza ngoba bebika ukuntuleka kwezi-mfanelo zokuzivikela (Personal Protective Equipment).
Okhulumela umnyango wezeMpilo uNtokozo Maphisa, uthe iziphathimandla sezikulungisile konke ebezikhala ngakho izisebenzi mayelana nokungatholakali, nokusetshenziswa nokulahlwa kwezinto zokuzivikela esezisebenzile, futhi zonke izisebenzi sezibuyele emsebenzini.
“Ngaphezu kokuba emhlabeni wonke kunenkinga yokuntuleka kwalezi zimfanelo zokuzivikela, uhulumeni uzozama ukuqinisekisa ukuthi izisebenzi ezidinga lezi zinto zokuzivikela ngokwesimo somsebenzi wazo, ziyazithola ngaso sonke isikhathi,” kusho uMaphisa.
Uthe kazikho iziguli eziphindiselwe emuva.
Inhlangano yabahlengikazi, iDemocratic Nurses Organisation of South Africa, ikhale ngokwenyuka kwesibalo sonesi nesodokotela okuthe uma behlolwa kwatholakala ukuthi sebehaqekile yigciwane leCovid 19.
Kuzokhumbuleka ukuthi isibhedlela esizimele, iSt Augustine’s, eThekwini, sibe nesibalo esikhulu sezisebenzi ezihaqekile ngaleli gciwane. Le nhlangano iphakami-se ukuthi lesi sibhedlela sivalwe ngenxa yokuhluleka wukuvikela izisebenzi zaso.
UNgqongqoshe wezeMpilo, uDkt Zweli Mkhize, umemezele ngoLwesibili ukuthi leli zwe linezimfanelo ezanele zokuvikela izisebenzi zezempilo ezisekhaleni lempi yeCovid-19 ngaphezu kokuba kusenezikhalo ngalokho.
Previous articleU-V Mash uzofihlwa kusasa e-Pretoria
Next articleUzwelonke nohlelo lwemfundo oluqale eKZN